Bahlaba othisha abashonelwa yingane | Isolezwe
Bahlaba othisha abashonelwa yingane
Isolezwe / 12 February 2013, 10:29am / NQOBIZIZWE ZWANE
U BASETHABE Hlongwane odlule emhlabeni emva kokugijima esikoleni sakhe i Ngcebo Primary
UGXEKA ubudedengu bothisha umndeni wentombazane yaseMnambithi, eZakheni ephelele ezandleni zikadokotela ngoLwesibili olwedlule emuva kokuquleka esikoleni ikade igijima izivocavoca nezinye izingane.
Namanje umndeni kaBasethabe Hlongwane (8), obefunda uGrade 3 eNgcebo Primary usashayana ngamakhanda ngokwenzekile kushona indodakazi yawo.
Umndeni utshele Isolezwe ukuthi ingane yawo iyekwe isikhathi esingaphezu kwamahora amathathu ingayiswa esibhedlela futhi yangabizelwa ne-ambhulensi yize iquleke phambi kothisha.
“Angikaze ngilubone unya olungaka lukhonjiswa kumuntu omncane njengoBasethabe. Labo thisha bayibukela ingane iqulekele phambi kwabo bangayisiza kusukela ngo-10 ekuseni yaze yathola usizo ntambama ngo-4.30. Iningi lothisha kulesi sikole linezimoto, siyazibuza ukuthi yayenzeni kangaka le ngane ukuthi bangayiphuthumisi esibhedlela noma babize abezimo eziphuthumayo. Yayenzeni ngempela futhi kubani,” kubalisa ilungu lalo mndeni uMnuz Thokozani Popelwa.
Eqhubeka uthe okuqaqambisa izinhliziyo zabo kakhulu wukuthi othisha abenzanga mizamo etheni ukwazisa ugogo wale ngane okuvela ukuthi akupheli ngisho imizuzu engu-30 usuka esikoleni uya kwakhe uma uhamba ngezinyawo.
“Othisha bathumela izingane ezincane kugogo kaBasethabe bethi aziyobika ukuthi usequlekile. Izingane azimficanga kanti abakwenza wukuphinda bathume ingane ngabo-2 ntambama kugogo babuye bamfonela. Sonke lesi sikhathi babezithulele kodwa izinamba zikagogo zikhona emininingwaneni yengane esikoleni. Ukuthi babethuleleni angazi,” kusho uPopelwa.
Echaza uthe bese kungokwesibili uBasethabe equleka esikoleni emva kokugijima, eveza ukuthi ngokwazi kwabo asikho isifo ebesimphethe.
“Waquleka emva kokugijinyiswa esikoleni okokuqala kwalamula uthishanhloko owamphuthumisa emtholampilo. Angazi ukuthi besikuphi isidingo sokuthi aphinde agijinyiswe ngoba kwabonakala ukuthi unenkinga. Ishwa esibe nalo wukuthi uthishanhloko ubengekho ngoba mhlawumbe ubezolusukumela lolu daba,” kusho uPopelwa.
Unina kamufi, uNksz Ntombikayise Mbatha uthe uzoya kulesi sikole ayofuna incazelo ephelele ngokwenzeka ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko.
“Ngizovukela khona kusasa (namuhla) ukuyothola incazelo ephelele ngokwenzeka enganeni yami ngoba angihlali nayo ngisebenza eGoli,” kusho uNksz Mbatha.
Enaba uthe okumjabhisa kakhulu wukuthi akukho zaba ezenziwa ukuzama ukuhlenga impilo yendodakazi yakhe kunalokho othisha bayiyekela kwezinye izingane ukuba ziyigade baziqhubekela nemisebenzi yabo.
“Ugogo wakhe ongumama wami uthi wamfica esagqoke ijezi nezicathulo emva kwamahora equlekile. Wayengakaze athelwe ngamanzi noma aphuziswe wona, wayekwa kanjalo nje. Umama uthi wamfica elele egadwe ngontanga yakhe kungekho ngisho uthisha oyedwa ukuqapha isimo,” kusho uNksz Mbatha.
UPopelwa uthe okuphinde kwacika wukuthi ngesikhathi efihlwa ngoMgqibelo uBasethabe kwafika othisha abathathu vo, kungekho ngisho umfundi oyedwa owayeqhamuka kulesi sikole.
“Kwakungekho ngisho ingane eyodwa. Ibuhlungu ngendlela engachazeki le nto,” kuphetha uPopelwa.
Ngesikhathi leli phephandaba lizama ukuthinta uthishanhloko uNkk Mokoena litshelwe ukuthi usemhlanganweni, uzolithinta uma eseqedile.